I-Kadaster kunye ne-KU Leuven iya kusebenzisana ekuphuhliseni i-NSDI e-Saint Lucia Nasemva kwemigudu emininzi, ngaphakathi kwecandelo likarhulumente, ukusetyenziswa ngokubanzi / ngobulumko bolwazi lwe-geospatial kulawulo lwemihla ngemihla, imigaqo-nkqubo yoluntu kunye ...
Kukokwaneliseka okukhulu ukuba sibhengeze ukuqaliswa kwemagazini ye-Geo-engineering yelizwe lase-Hispanic. Kuya kuba nekota yekota, i-digital edition etyetyiswe ngomxholo we-multimedia, ukukhuphela kwi-pdf kunye noshicilelo oluprintiweyo kwiziganeko eziphambili ezigutyungelwe ...
Kupapasho lwalo lwamva nje, umthamo we-28-ngenyanga kaMatshi no-Epreli 2019-, imagazini yeMaphu ibeke njengomxholo wayo ophambili yonke into enxulumene neNkomfa ye-IX ye-Iberian kwiZibonelelo zeNkcukacha zeSpatial. Ngaphakathi kwe...
Nge-2 ka-Epreli 2019, eAmsterdam: IForam yeHlabathi yeGeospatial (GWF) ka-2019, esona siganeko besilindelwe kuluntu lwehlabathi jikelele, luqalise izolo eTaets Art & Event Park eAmsterdam-ZNSTD. Lo msitho uqale ngabathunywa abangaphezu kwe-1,000…
Ngo-2013 senze ulwahlulo lweejenali ezinikezelwe kwicandelo le-geomatics, sisebenzisa isikhundla sabo se-Alexa njengesalathiso. Kwiminyaka emi-5 kamva senze uhlaziyo. Njengoko besitshilo ngaphambili, iimagazini ze-geomatics kancinci kancinci ziye…
Nge-26 kaMatshi, ngo-2019: I-Geospatial Media kunye noNxibelelwano ibhengeze abaphumeleleyo ibhaso lobuNkokheli behlabathi be-Geospatial ka-2019, elijolise ekubhiyozeleni iinkokeli kushishino lwe-geospatial eziye zazisa izinto ezintsha kwindawo yazo yokusebenza…
Ngomhla we-2 ku-Epreli, i-3 kunye ne-4 yalo nyaka, iinqununu eziphambili kwi-teknoloji ye-geospatial ziya kuhlangana e-Amsterdam. Sibhekisa kumsitho wehlabathi owenzeka ngeentsuku ezi-3, kwaye ebesibhiyozela…
Ngaphambili: Ukujongana nayo yonke into enxulumene nejografi kunye nophuhliso lwe-cartography kwilizwe ngalinye kuye kwavelisa ukudalwa kwee-arhente zikarhulumente ezijongene nalo msebenzi obalulekileyo. Kwezinye iimeko kuxhomekeke kuMphathiswa...
Ndilufumene ushicilelo lwale kota yokuqala ka-2015, enomxholo obalulekileyo ngeSpanish. Imixholo iyodwa ithetha ngokubanzi ngexabiso elimelwe ngabasebenzisana nabo: Ixesha elitsha kulawulo lomhlaba liyavela. …
Kanye xa sikwixesha apho umda wokwenyani wentsebenziswano yamazwe ngamazwe kuphuhliso kunye neenzame zelizwe ngalinye ukucwangcisa isicwangciso salo kwiinjongo zokuphucula umgangatho wobomi...
Olu hlelo lwamva nje lweNational Geographic luzisa imixholo emibini enika umdla omkhulu: Kwelinye icala, ingxelo ebanzi ngenkqubo yomfuziselo welifa lemveli kusetyenziswa iisistim zokubanjwa kwelaser. Le yingqokelela yezinto, ecacisa…
Iijenali ze-Geomatics ziye zavela ngokuthe ngcembe ngesingqi sesayensi engcaciso yayo ixhomekeke kakhulu kwinkqubela phambili yetekhnoloji kunye nokudityaniswa kwezifundo emhlabeni jikelele. Iindlela zangoku zibulewe...
I-MundoGEO#Connect ibhengeze ukuvulwa kwenqanaba lesibini lebhaso eliqaphela eyona shishini le-geospatial ukuze ukwazi ukuvotela omnye kwabahlanu abaphumeleleyo kudidi ngalunye. Ngenyanga ka-Epreli, uluntu…